Posted by JuneOne at 10:31 PM
Chit cha lay.Pu Kyu lay ka."What r u looking at baby?"
ZT July 18, 2009 at 11:52 PM
ကော်ရည်မစားရတာ ကြာပြီ။ Lor Mee ပဲ စားနေရတယ်။
Rita July 18, 2009 at 11:59 PM
အမယ် သူက တူတူ ဒါ့ပုံ မရိုက်နိုင်ဘူးပေါ့လေ။ တူညားအိမ်ကို သွားစားပြီးတော့။
khin oo may July 19, 2009 at 1:34 AM
ဖိုးစိန် July 19, 2009 at 6:19 AM
nu-san July 19, 2009 at 11:03 AM
သားလေးဓာတ်ပုံတွေ ထိုင်ကြည့်ရင် ဘယ်တော့မှ ကြည့်မ၀ဘူး.. ၁ နှစ်ကျော်နေပြီဆိုတော့ တော်တော်တတ်နေပြီနော.်.. :)
subuueain July 19, 2009 at 11:06 AM
ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲမစားဖူးဘူး။ ငါးပိထောင်းနဲ့ ဘယ်လိုစားရမှန်းမသိလို့ ။ သားလေးက ဝနေတာဘဲ ချစ်ဖို့ ကောင်းလေး။ မွေးနေ့ ရှင်လေးရော happy birthday ပါ
sin dan lar July 19, 2009 at 3:07 PM
ပုကျုကိုကြည့်ရင် အကျီင်္လက်ပြတ်နဲ့ ခပ်တည်တည်နဲ့ ....။
သူက မာနတော့ အကြီးသားပါလား... သူများကော်ရည်ခေါက်ဆွသြွားစားပြီး ဓာတ်ပုံတော့ တူတူမရိုက်နိုင်ဘူးတဲ့လား..ဟားဟား...။
မိုးကောင်းသူ July 20, 2009 at 9:28 AM
ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲ လာစားပါတယ်။ ပုကျုလေးက ချစ်စရာ။ အမေကလဲ ချစ်စရာကောင်းတာကိုးးးးးးးးးးးးးး
ပုံရိပ် July 20, 2009 at 10:25 AM
ပါဆယ်ဆွဲလို့ ရမယ့် အိမ်ရှိတာ အပီပဲ ကောင်းလိုက်တာ။
kaungkinpyar July 20, 2009 at 2:11 PM
အမေနဲ့ ပုကျူလေးနဲ့ တူတယ်နော်၊ သားသားလူလည်လေးဖြစ်နေပိပေါ့၊ စကားတွေ တတ်နေပီလားဟင်
Mae July 24, 2009 at 9:20 PM
ကော်ရည်မကြိုက်.. ကျောက်ကျောတော့ ညက တောင် အိပ်မက်မက်သလိုပဲ၊
သားလေးက ဘုကြည့်ကြည့်လို့.. ချစ်လိုက်တာ
yanmyo July 27, 2009 at 2:24 PM
အိမ်မှာ ထမင်းချက်၊အ၀တ်လျှော်၊ ကလေးထိမ်းလုပ်နေရတော့၊ ထမင်းချက်တာမလွယ်မှန်းသိတော့တယ်၊ မြန်မာပြည်ကအမျိုးတွေကိုလွမ်းမိရဲ့၊ အခုတော့ အားလုံးကိုယ့်ဟာကိုယ်လုပ်နေရပြီ၊
မေလေး August 13, 2009 at 1:31 PM
khin oo may September 19, 2009 at 1:21 PM
မွေးနှေ့ရှင်က ပိန်တယ။် ဟိ